Akwụkwọ Conor Cawley na Martech Zone |
Edemede site na Ọnye na -bụ Conor Cawley?
Ọnye na -bụ Conor Cawley?
Conor bụ Onye edemede edemede maka Tech.co. N'ime afọ anọ gara aga, edere ya banyere ihe niile site na mkpọsa Kickstarter na mmalite mmalite ka ọ bụrụ teknụzụ teknụzụ na teknụzụ ọhụụ. Nzụlite ya sara mbara na ihe nkiri na-eguzo ọtọ mere ka ọ bụrụ onye zuru oke iji kwado mmemme mmemme nke teknụzụ dịka Startup Night na SXSW na Timmy Awards for Tech in Motion.
Nsonaazụ nyocha: Kedu ka ndị ahịa na-azaghachi maka ọrịa na-akpata ọrịa na mkpọchi?
Tọzdee, Disemba 24, 2020 Tọzdee, Disemba 24, 2020 Ọnye na -bụ Conor Cawley?
Ka mkpọchi a kwụsịrị wee nwekwaa ndị ọrụ ọzọ na-alaghachi n’ọfịs ahụ, anyị nwere mmasi n’ịchọpụta ihe ịma aka ndị obere azụmaahịa chere ihu n’ihi ọrịa Covid-19, ihe ha na-eme maka mkpọchighị azụlite iji zụlite azụmaahịa ha, ihe ọ bụla ha merela. , teknụzụ ha ji rụọ ọrụ n'oge a, yana ihe atụmatụ na echiche ha maka ọdịnihu. Ndị otu nọ na Tech.co nyochara obere azụmaahịa 100 gbasara otu ha siri jikwaa n'oge mkpọchi ahụ. 80% nke